Amandla-I-AOOD Technology limited
Namhlanje, umoya yenye yeetekhnoloji zamandla ezikhula ngokukhawuleza. Amandla omoya kubandakanya ukuguqula amandla omoya abe ngumbane ngokusebenzisa oomatshini bomoya. I-AOOD iphuhlise iminyaka emininzi yolwazi lwezicelo kwiiinjini zomoya kwaye inempumelelo enkulu ekunikezeleni ngeenkqubo zolondolozo ezisezantsi kakhulu kwiindawo ezinobuzaza.
Amakhonkco okutyibilika asetyenziswa ikakhulu ukubonelela ngombane kunye namandla ombane webala kunye nolawulo. Kwinkqubo ye-hydraulic, iringi yesiliphu kunye nomanyano ojikelezayo wamanzi kufuneka zidityaniswe ukubonelela ngemiqondiso emininzi,
Ukuhanjiswa kombane kunye nokuhanjiswa kwamandla ombane we hydraulic blade pitch actuation. Kwinkqubo yombane, kufuneka ityibilikise isangqa kunye neesekethe zamandla aphezulu zokuhambisa imiqondiso kunye namandla ombane kulungelelwaniso lombane.
Isangqa esityibilika phezulu samandla siyafuneka ukubonelela ngokuhambisa okuphezulu okwenziweyo ukuze kuqiniswe iikhoyili zendlela kwi-drive ngqo. Ukongeza, ukuhlangabezana neemfuno zeendibano zesilingi ezihlanganisiweyo, amakhonkco e-AOOD anokufakwa kunye neekhowudi kunye nokusombulula, amalungu e-fiber optic rotary, imibutho yabasebenzi ejikelezayo kunye neRF rotary joints.
Njengomkhokeli wehlabathi kwizazinge ezifayilishwe, i-AOOD iphuhlise itekhnoloji yokuhambisa iselfowuni eqaqambileyo eqinisekisa ukuba amakhonkco e-AOOD omoya amtyibilizi angaphezulu kwesigidi seerandi. Kananjalo ziyilelwe ukufanisa imeko engqongileyo, banokumelana nobushushu obuphezulu obuphezulu okanye obuphantsi, uhlaselo lwesanti kunye nothuli kunye nokubola kwamanzi olwandle.
Iimveliso ezinxulumene noko: Imisesane yesiqhelo seSlip